Manchester United oo amaah ku direysa mid ka mid ah Weeraryahannadeeda haddii… (Mana ahan Odion Ighalo) – Gool FM
(Manchester) 07 Juun 2020. Sida wararku ay sheegayaan Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa amaah ku diri karta mid ka mid ah weeraryahannadeeda kaddib markii ay ceshatay Odion Ighalo.
Manchester United ayaa amaah ku diri karta Weeraryahankeeda Daniel James kal ciyaareedka 2020-21.
22-sano jirkaan ayaa Red Devils kaga soo biiray Kooxda Swansea City xagaagii hore, waxaana uu ahaa mid joogto u ciyaaray intii lagu gudajiray xilli ciyaareedkan haatan socda, isagoo dhaliyey afar gool, isla markaana sameeyey toddobo caawin 37 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
Si kastaba ha noqotee, xiddiga xulka qaranka Wales ayaa ku dhibtoon kara kubbadda cagta xilli ciyaareedka soo socda iyo inuu boos joogto ah heli haddii Man United ay bartilmaameedkeeda koowaad ee Jadon Sancho ka soo qaadato kooxda Borussia Dortmund bilaha soo socda.
Wargeyska The Sun ayaa warinaya in qaabka James xilli ciyaareedkaan uu u arko in lagu abaal-marin karo qandaraas cusub oo horumarsan, laakiin kooxda 20-ka jeer haysata horyaalka Ingiriiska ayaa ka fiirsanaysa inay amaah ku bixiso weeraryahan xilli ciyaareedka soo socda si uu u sii horumariyo qaab ciyaareedkiisa.
Xiddiga reer Wales ayaa dhaliyey saddex gool afartiisii kulan ee ugu horreysay oo uu ka soo muuqday horyaalka Premier League, waxaana uu ku bilowday qaab sare xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey, balse tan iyo markaas shabaqa waa uu soo taaban waayey kulammada horyaalka.